Marc Ravalomanana : Tohanan’ireo kandidà maro an’isa -
AccueilRaharaham-pirenenaMarc Ravalomanana : Tohanan’ireo kandidà maro an’isa
Marc Ravalomanana : Tohanan’ireo kandidà maro an’isa
27/11/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Voaporofo tamin’ ny alalan’ny fanohanan’ireo kandidà maro an’isa nandray anjara tamin’ny fifidianana filoham-pirenena farany teo, fa Ravalomanana Marc no andraindrain’ny maro hitondra sy hanavotra indray ny firenena. Vonona hiatrika ny fihodinana faharoa i Marc Ravalomanana, na misy aza ny antsojay atao amin’ ireo mpanohana azy amin’ izao fotoana.
“Tsy manda izay olona hanohana ahy aho”, io no valitenin’i Marc Ravalomanana raha nanontaniana mikasika ireo izay hanohana azy amin’ ny fifidianana fihodinana faharoa amin’ ny 19 n’ ny volana desambra ho avy izao. Nambarany tamin’ izany fa ireo kandidà no miantso azy, milaza ny fahavononan’izy ireo noho ny fahitany ny fampandrosoana entin’ ny MAP II. Hatreto anefa hoy Marc Ravalomanana dia mbola fifampiresahana no natao tamin’ ireo kandidà, ary ho hita amin’ ny manaraka ny endriky ny fifanohanana. Mikasika izay fanohanana ny kandidà Marc Ravalomanana izay ihany, dia nanontanian’ny mpanao gazety ny mety ho fanohanan’ny HVM azy sy ny mety endrika handraisan’ny vahoaka izany. Valitenin’ i Marc Ravalomanana amin’ izany dia hoe, “manohana ahy ny HVM, ary tsy amin’ ny alalan’i Hery Rajaonarimampianina aloha hatreto, fa ireo manodidina azy dia efa miara-miasa amiko avokoa. Isan’izany izao ny fihaonana tamin’ ireo fikambanana tanora miaraka amin’ ny HVM ” hoy izy. Noho izany, nambaran’i Marc Ravalomanana fa fotoanan’ny fanambarana ny hery izao, entina hampandrosoana an’i Madagasikara. Vonona amin’ ny fifidianana fihodinana faharoa ny kandidà Marc Ravalomanana, satria maika hoy izy ny fanampiana ny vahoaka tsy ankanavaka.
Nambaran’i Marc Ravalomanana ihany koa, fa misy ny antsojay amin’ izao fotoana izao manjo ireo mpanohana azy, saingy mila mitraka hatrany ny rehetra hahazoana ny fandresena. Maika ny fanampiana ny Malagasy amin’ izao fotoana izao hoy i Marc Ravalomanana, noho izany tsy tokony hisy intsony ny korontana eto amin’ ny firenena. Mila andrasana ampitoniana ny valim-pifidianana avoakan’ ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana handehanana mankany amin’ ny dingana faharoan’ ny fifidianana filoham-pirenena. Tsy nohadinoin’ i Marc Ravalomanana noho izany ny nisaotra sy nankasitraka ireo mpifidy azy, satria mbola mitohy ny adidin’ny mpifidy amin’ ny fihodinana faharoa, amin’ ny faha-19 n’ ny volana desambra ho avy izao.
Voatery nandray fanapahan-kevitra nanapaka ny jiro sy rano tao amin’ny TIKO Andranomanelatra ny orinasa JIRAMA noho ny trosa mihavosa tahaka ny fakon’Antananarivo, mahatratra hatrany amin’ny 20 miliara. Fisehoana ivelany fotsiny ihany daholo ny filanjana Baiboly ...Tohiny
Tangalamena, Sojabe : Hanangana ny Filan-kevitry ny Olon-kendry
Ivandry : Lafarinina efa simba 26 taonina mbola saika amidy